Avast AntiVirus ကို Disable လုပ်နည်း ~ မျိုးကို
Avast AntiVirus ကို Disable လုပ်နည်း
08:23 Antivirus, Disable, How To, Technique 1 comment
တစ်ခါ တစ်လေ ကိုတို့ ကွန်ပျူတာမှာ ဆော့ဝဲ တွေ Install လုပ်ပီး ( ဖူးဗားရှင်း ) လုပ်ကြတဲ့အခါ ( Antivirus ) ကိုပိတ်ထားရတဲ့ အခါမျိုးမှာ ကို Run ထားတဲ့ Antivirus ကို ခဏ ပိတ်ထားရတဲ့ အခါမျိုးကို မလုပ်တက်သေးသော သူများ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်...။
Avast ကို Disable လုပ်တဲ့ နည်းလေးပါ
1. Avast Icon ကို Click နှိပ်လိုက်ပါ..။
2. Setting ကိုသွားပါ..။
3. Left Pane ထဲက Troubleshooting ကိုသွားပါ..။
4. Enable Avast! Self defense module ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ ...။ ဒါဆိုရင်တော့ သူက Virus ၀င်ရောက်နိုင်ကြောင်း Warning ပေးမှာပါ..။
နောက်ထပ် Box လေးတွေ ပေါ်လာရင် OK ကိုနှိပ်ပါ..။ System Tray ထဲမှ Icon ကို Right Click နှိပ်ပီး Stop On-Access protection ကို Click နှိပ်ပါ...။ နောက်ထပ် Box ပေါ်လာရင် Click လုပ်ပါ...။
Maribel Artaste 31 July 2012 at 09:57